Ahoana ny fomba hamoronana sary misy fiantraikany avo roa heny amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hamoronana sary misy fiantraikany roa amin'ny Photoshop
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop
El Ny effet d'expansiona roa sosona dia ahafahanao manome fikasihana ara-javakanto ary feno dikany amin'ny sary iray. Afaka nahita izany isika, ohatra, ao amin'ny lohatenin'ny andiany toy ny velona aho (RTVE) na True Detective (HBO). Toa tena tsara izany, ka mety hihevitra ianao fa sarotra be ny manao izany, fa tsia, alamino fotsiny ary tandremo ny filaharan'ireo sosona. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko tsikelikely, Ahoana ny fomba hamoronana sary miaraka amin'ny effet exposure double in photoshop Andramo izany!
1 Safidio ny lohahevitra, safidio tsara ary mamorona lafika
2 Ampidiro ny sary faharoa, kopia saron-tava ary ovay ny fomba fangaro
3 Esory ny kilema kely ary avereno atao "layer 1"
4 Ovay ny «layer 2» ary manatsara ny fahitana ny tarehy
5 Ampio ny fiainana ny sary, manome ny farany mikasika
6 Ahitsio ny frame ary atambatra ny sosona
Safidio ny lohahevitra, safidio tsara ary mamorona lafika
Pre-annotation: Raha mampiasa sary miloko ianao, ampidino ny saturation ho ambony indrindra (azonao atao izany amin'ny fandehanana any amin'ny tabilao sary> fanitsiana> desaturate).
Ny zavatra voalohany hataontsika dia mifidy ny zazavavy. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana "select subject"., no haingana indrindra. Misy fika, izay no nampihariko teto, manampy anao manaova safidy tonga lafatra (Avelako ato amin'ity rohy ity).Rehefa voafantina ny lohahevitra dia ho any amin'ny tabilao fifantenana isika, hitady ny safidy "modify" ary hanao fifantenana eo amin'ny 2 px izahay mba tsy handao anay amin'ny halo.
Ankehitriny dia mila isika mamorona sarontava, ny fanindriana ny marika izay miseho voamarika sy misy ny isa «1» dia ho noforonina ho azy. Tsindrio ny saron-tava, miaraka amin'ny borosy, hanitsy ny lesoka sasany, ohatra ny faritry ny orona, ary hofoanantsika ny tsipiriany izay tsy manampy na inona na inona amin`ny famolavolana ao an-tsaina, toy ny ampahany sisa amin`ny rojo. Esoriny ihany koa ny sisa tavela amin'ny volo sisa tavela. Tsarovy fa miaraka amin'ny loko mainty saronantsika ary miaraka amin'ny fotsy dia mamela ny sosona hita maso. Farany, tsindrio ny baiko + T (Mac) na ny fanaraha-maso + T (Windows), mba manetsika ny kapa ary manakana ny akanjo tsy ho hita an'ilay zazavavy Antsoinay hoe "layer 1" ity sosona ity.
Handeha isika mamorona background, azonao omena ny loko tianao, nisafidy ny hitazona afara fotsy aho. Mba hamoronana azy, tsindrio ny famantarana izay miseho amin'ny sary etsy ambony miaraka amin'ny isa "2", safidio loko fanamiana ary hisy varavarankely hisokatra ho anao hamaritana ny loko. Ity sosona ity dia antsoina hoe "background".
Ampidiro ny sary faharoa, kopia saron-tava ary ovay ny fomba fangaro
Fotoana izao manafatra ny sary izay hanambatra ny sary an'ilay zazavavy Nisafidy an'ity tontolo ity aho, matetika amin'ny karazana endrika toy izany dia tena tsara ny filentehan'ny masoandro. Azonao atao ny misintona azy mivantana ary ampidirina ho sosona vaovao, ataovy azo antoka fa izany eo an-tampon'ny "sosona 1" ary omeo anarana hoe "landscape". ampidino ny opacity amin'ny sosona, mba hahitana ny "layer 1", ary tsindrio ny baiko + T (Mac) na fanaraha-maso + T (Windows), manetsika azy ary manova ny refy amin'izay tianao (raha hanitatra na hampihena ny habeny ianao dia tadidio ny manindry ny lakile safidy, raha miasa amin'ny Mac ianao, na alt, raha miaraka amin'ny Windows ianao, mba tsy hanimba azy).
Ah Orale haverinay ny opacity tany am-boalohany (100%) ary ampiharo ny dika mitovy amin'ny saron-tava eo aminy izay noforoninay tao amin'ny "layer 1", dia tsy maintsy manindry azy fotsiny ianao ary, mihazona ny safidy (Mac) na alt (Windows) fanalahidy, tariho mankany amin'ny "layer landscape". KOA hanova ny fomba blending isika. Fidio izay tianao, miankina amin'ny fomba tianao hotratrarina, manoro hevitra aho: hazavana malefaka, hazavana matanjaka na superimpose. Nisafidy aho hazavana mahery satria tiako ho voatahiry ny lokon'ny filentehan'ny masoandro.
Esory ny kilema kely ary avereno atao "layer 1"
Tadidinao ve ilay ampahany tamin'ilay rojo nesoriko? Nataoko izany satria ny rhinestones amin'ny rojo dia manarona ny tontolo iainana, dia hanaisotra izany izahay. Mandehana any amin'ny saron-tava "layer 1" ary safidio ny borosy. Hanova ny toe-javatra ao amin'ny bara safidy fitaovana, misafidy borosy malefaka boribory, ataovy lehibe ny habeny ary ampidino ny opacity ho 25%. Handeha isika tap ny rojo mandra-panjavonany fa tsy misy tsikaritra tapaka na pentina hafahafa. Ataovy toy izany koa ny faritra ambany amin'ny sofina, izay tena maizina ary manarona be loatra ny tany. Rehefa vita ianao duplicate sosona 1, atao hoe sosona 2 ary apetraho eo ambony.
Ovay ny «layer 2» ary manatsara ny fahitana ny tarehy
Aleo ahena ny opacity ny "sosona 2" amin'ny 25%. Mba hanatsarana ny fahitana ny tarehy dia handeha amin'ny saron-tava "landscape" isika ary miaraka amin'ny borosy boribory mainty miparitaka. handoko isika mba ho hita tsara kokoa ny endri-javatra an'ilay zazavavy
Ampio ny fiainana ny sary, manome ny farany mikasika
Ny zavatra ananantsika hatramin'izao dia efa tsara, fa ndao hanome azy ny fikasihana farany mba ho tonga lafatra ny vokany. Afeno ny sosona rehetra, anisan'izany ny saron-tava, minus ny sosona "landscape". Mba hahatonga ny saron-tava manarona azy tsy hita maso, tsindrio eo ary tsindrio ny maso izay voamarika amin'ny sary etsy ambony. Miaraka amin'ny fitaovan'ny fifantenana nofidinao, dia nampiasa ny fitaovana fifantenana zavatra aho, mifidiana ny sasany amin'ireo vorona nijanona teny an-danitra, Adikao ary apetaho amin'ny sosona misaraka izy ireo izay hapetratsika eo ambony. Ataovy azo antoka fa tsy mamela halo ianao rehefa misafidy satria hiseho izany. Amin'io sosona vaovao io, miaraka amin'ny vorona, Hampihatra ny fomba fampifangaroana mitovy amin'ny tontolon'ny tany izahay ary hampidina ny opacity ho 80% mba hitovy araka izay azo atao ny tonony. Azonao atao ny mamindra ny sosona ary mametraka ny vorona na aiza na aiza tianao, raha manana iray foana ianao azonao atao ny mamorona saron-tava ary manarona azy ireo amin'ny mainty tahaka ny efa nataontsika teo aloha.
Raha mijery ianao, ho tapaka ny vorona sasany, na tsy ho tianao ny bika aman'endriny. Cmiaraka amin'ny plug clone azonao hamafa azy ireo. Santionany fotsiny amin'ny fanindriana ny lakile safidy ary hosodoko tsara ny singa tianao hofafana.
Ahitsio ny frame ary atambatra ny sosona
Angamba, rehefa manampy vorona ny sary dia tsy voaravaka tsara, miaraka amin'ny fitaovana fambolena azonao atao ny manova ny frame. Toy izao no mety ho endriky ny sarintsika miaraka amin'ny vokatra avo roa heny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba hamoronana sary misy fiantraikany roa amin'ny Photoshop
Ahoana ny fomba hanaovana layout magazine
Ahoana ny fomba fanaovana litera gothic